Skype ကို Lite ကို - အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် & Chat ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Skype ကို Lite ကို - အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် & Chat ကို
Skype ကို Lite ကို - အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် & APK ကို Chat
Skype ကို Lite ကိုသစ်ကို Skype ကိုသင့်ရဲ့နေ့စဉ် messaging နှင့်ဗီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အိန္ဒိယအဘို့တည်သည်။ ဒါဟာအသေးအစာရှောင်ခြင်း, နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါဟာသင်အခမဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နှင့် voice & ဗီဒီယိုကိုပင်ကန့်သတ်ကွန်ယက်ကိုအခြေအနေများအောက်တွင်ခေါ်ဆိုစေပေးနိုင်ပါတယ်။ Skype ကို Lite ကိုအမြဲသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေဖို့ကူညီပေးပါမည်။ငါ Skype ကို Lite ကိုနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
Skype ကို Lite ကိုထိုကဲ့သို့သော SMS အတွက်ထောက်ခံမှု, ဇာတိဖုန်းအဆက်အသွယ်များနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ဒေတာအသုံးပြုမှုခြေရာခံခြင်းအဖြစ်အသစ်နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံ features တွေနှင့်အတူအိန္ဒိယစျေးကွက်အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်, အိန္ဒိယများကဲ့သို့အများအပြားအခမဲ့ Skype ကိုအင်္ဂါရပ်တွေအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်ကူညီရန် Skype ကို bot တွေကိုအာရုံစူးစိုက် အခမဲ့စာပို့, အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သင်ပြီးသားကိုသိနှင့်ချစ်ခြင်း!
Skype ကို Lite ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်အမြန်ပေါ့ပါးသည်နှင့်လူကြိုက်အများဆုံး Android ထုတ်ကုန်အပေါ်အစာရှောင်ပြေး။ ပင်ကန့်သတ်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုအောက်တွင်နှင့်သင်ကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု features တွေချွေတာဒေတာနှင့်အတူပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီရန် - ဒါဟာကောင်းစွာဖျော်ဖြေဖို့နောက်ဆုံးပေါ် Skype ကိုနည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ သငျသညျယခု Skype ကို Lite ကိုအတူလုပျနိုငျသောအရာတို့ကို:
• Skype ကိုအပေါ်မည်သူမဆိုနှင့်အတူအခမဲ့အသံသည်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
•အခမဲ့ Skype ကိုကနေတဆင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူ Chat
• SMS ကို Insights နှင့်အတူအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်နေ့စွဲလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ
•အ app ထဲမှာသင့်ရဲ့ဒေတာသုံးစွဲမှု messaging နှင့်ဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုမှုများအတွက်မည်သည့်အချိန်ကိုသိပါ။
•ဝေမျှမယ်ဓာတ်ပုံများ, ရုပ်ပြောင်, ဖုန်း screen နဲ့ဖိုင်တွေ (300 ကို MB အထိ)
• Skype ကို bot တွေကိုလောကီသားတို့သည်အ Explore
•အခမဲ့အိန္ဒိယကနေအမေရိကန် / ကနေဒါကုန်းမြေနယ်နိမိတ်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှတောင်းဆို။ အထူး, ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှု & Non-ပထဝီနံပါတ်များကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်။ အင်တာနက်နှင့် / သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အပြည့်အဝကြည့်ရှုပါ: www.skype.com/en/legal/free-calls-from-india-offer-terms/
ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ် Skype ကို Lite ကိုနှင့်သင်၏စာပို့ခြင်း & ဗီဒီယိုကိုခေါ်ဆိုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝဖို့အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ Skype ကိုရဲ့အနာဂတ်ပုံဖော်ကိုကူညီ skypem2feedback@microsoft.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ချက်ပေးပါ!
Skype ကို Group မှ Calling မှ
Skype ကိုအားလုံးကရင်ဆိုင်ရ-to-မျက်နှာရဲ့ရှိမရှိအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုကျော်နိုင်အောင်အတူတကွလူတွေဆောင်ခဲ့အကြောင်းပါ။ အခမဲ့အားလုံး - အိန္ဒိယ, Group မှ video call ကိုဖြတ်ပြီးအားလုံး app ကိုအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ပါမည်သူမဆို Skype ကို Lite ကိုအပေါ်အုပ်စုဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံခေါ်ဆိုမှု join ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ချိတ်ဆက်ခြင်းလွယ်ကူပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအ Skype ကို Lite ကိုအပေါ်ခေါ်ဆိုမှု tab ကိုအပေါ်ကိုအသာပုတ်, ဤ app ကိုအပေါ်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအုပ်စုခေါ်ဆိုခကိုစတင်ပါ။ သင်တို့သည်လည်း WhatsApp ကို Facebook က Messenger ကိုသို့မဟုတ် SMS နဲ့တူလူကြိုက်များလူမှုရေး apps များပေါ်တွင်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်တစ်ဦး Skype ကို Lite ကိုအုပျစုခေါ်ဆိုမှုလင့်ဝေမျှနှင့်ခေါ်ဆိုမှု join ဖို့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Skype ကိုအကောင့်ရှိသည်မဟုတ်လော သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? မဟုတ်ပြဿနာတစ်ခု! သငျသညျအနေဖြင့်အုပ်စုတစ်စုကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုလင့်အားလက်ခံတွေ့ဆုံသူမည်သူမဆိုတက်လက်မှတ်ထိုးသို့မဟုတ်နောက်တဖန်အကောင့်တစ်ခု Skype ကိုသို့လက်မှတ်ထိုးရန်မလိုဘဲ, အမည်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ချက်ချင်း Skype ကို Lite ကိုအပေါ်တစ်ဦးဧည့်သည်အဖြစ်ခေါ်ဆိုမှု join လို့ရပါတယ်။
SMS ကို Insights ကဘာလဲ?
SMS ကို Insights အသိဥာဏ်သင်၏ SMS မက်ဆေ့ခ်ျအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေး, ချိန်းသို့မဟုတ်ခရီးသွားအဖြစ်မတ်အမျိုးအစားထဲမှာတစ်ချက်မှာတင်ဆက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ နောက်ကွယ်မှာ Microsoft ကသင့်ရဲ့ဖုန်းကို SMS ကနေသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ခွဲခြားနှင့် extract မှစက်သင်ယူမှုမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များသင့်ရဲ့ဖုန်းများပေါ်တွင်ဒေသအလိုက်ကို run ခြင်းနှင့်လုံးဝ automated နေကြသည်။
SMS ကို Insights ၏တံခါးသော့ကိုအသုံးပြုသူအကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာလဲ?
သင့်ရဲ့လတ်တလော SMS စာတိုကိုသုံးပြီး, SMS ကို Insights ရန်သင့်အားဖွ:
•ပံ့ပိုးပေးတစ်လွှားအွန်လိုင်းဝယ်ယူမှု၏ပေးပို့ status ကိုခြေရာခံ
•လေယာဉ်ခရီးစဉ် status ကိုစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေး-in ကိုသင်တို့ပြေးရသောအဘို့
•စစ်ဆေးမှုရထားနှင့် PNR ပြ status
•လက်လီအရောင်းဆိုင်များသို့ SMS မှတဆင့်သင်တို့ကိုစေလွှတ်ကြောင်းကိုအထူးလျှော့စျေး Organize
ငါတို့သည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်မှနီးကပ်စွာစကားကိုနားထောငျနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ app ကိုပင်ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်မွမ်းမံမှုများလုပ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါပြီ။
Skype ကို Lite ကို - အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် & Chat ကို
17.58 ကို MB
Jude agenorwoth says:
ဇန်နဝါရီလ 18, 2018 မှာ 1: 05 ညနေ
ယင်း၏ကောင်းသောဒါပေမယ့်အိန္ဒိယမှာသာမကကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကိုယ်မင်းကို guyz ဆန္ဒရှိပုံကို
ဒူလ် Kareem says:
ဇန်နဝါရီလ 4, 2018 မှာ 6: 41 ညနေ
တစ်ထိပ်တန်း BRO Duper